Cusboonaysiinta Shirkadda Badeecooyinka Dawooyinka ee Aasiya
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Cusboonaysiinta Shirkadda Badeecooyinka Dawooyinka ee Aasiya
Everest Medicines ("Everest" ama "Company"), shirkad biopharmaceutical ah oo diiradda saareysa horumarinta iyo ganacsiga dawooyinka isbeddelka ah ee wax ka qabta baahiyaha caafimaad ee muhiimka ah ee bukaannada Aasiya, ayaa maanta ku dhawaaqday inay dib u soo iibsatay 1,095,000 saamiyo caadi ah oo u dhiganta ku dhawaad ​​HK $ 50 milyan suuqa furan muddada u dhaxaysa Oktoobar 4, 2021 ilaa Oktoobar 29, 2021, celcelis ahaan qiimaha HK$45.63 saamigiiba. Faahfaahinta wax kala iibsiga shakhsi ahaaneed ayaa laga heli karaa qaybta maalgeliyayaasha ee mareegaha Shirkadda.
Dib-u-iibsiyada ayaa lagu sameeyay HK$100 milyan barnaamijka dib-u-iibsiga saamiyada ee lagu dhawaaqay laga bilaabo Agoosto 30, 2021. Qiimaha saamiga hadda, Shirkaddu waxay aaminsan tahay in saamiyadeedu ay ku ganacsanayaan qiimo dhimis qiimihiisu hoose, waxaana laga yaabaa inay sii wadaan iibsashada saamiyada suuqa furan. Shirkaddu waxay si buuxda uga go'an tahay inay abuurto qiimaha saamilayda waxayna leedahay xukun adag oo ku wajahan aragtideeda mustaqbalka. Laga bilaabo Juun 30, 2021, Shirkaddu waxay haysatay RMB3,971.0 milyan oo caddaan ah iyo lacag caddaan ah.
Shirkaddu waxay samayn doontaa dib-u-iibsasho kasta oo saamile ah iyadoo la raacayo qoraalka iyo qodobbada ururka ee shirkadda, Xeerarka lagu maamulayo Liiska Securities ee Sarrifka saamiyada ee Hong Kong Limited, Xeerarka Qaadashada iyo Isku-darka iyo Qaybsiga iibka, Sharciga Shirkadaha Jasiiradaha Cayman iyo dhammaan sharciyada iyo qawaaniinta lagu dabaqi karo shirkadu ay hoos imanayso.